Princess Diana Nweghachi n'aka Prince William na vidiyo Viral - Ozi
Princess Diana na-ahapụ nwatakịrị Prince William ka ọ na-eme etemeete ya na vidiyo na-adịghị ahụkebe
Princess Diana Lets Young Prince William Do Her Makeup Rare Behind Scenes Video
Anyị ga-agha ụgha ma ọ bụrụ na anyị asị na mmụba anyị nwere na Diana, Princess nke Wales, enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na oge nke anọ Okpueze bu nke mbu ihe kariri otu onwa gara aga. Ma ka anyị gụchara usoro iri ahụ ọsịsọ ka anyị nwere ike iji mmụọ hazie ha, anyị (ya na ụwa ndị ọzọ, ọ dị ka) anyị na-achọsike nwetakwu ọhụụ n'ime ndụ ya mara mma (n'agbanyeghị na ọ dị mkpụmkpụ)
Akwukwo nke Princess Diana kekọrịta (@ diana.legacy)
Ya mere, ọ gaghị eju anyị anya na vidiyo nke Princess Diana na Prince William achọpụtabeghị nso nso a.
Na obere vidiyo, nke akaụntụ Diana na-akọrọ @ diana.legacy , William dị afọ 3 na-enyere nne ya aka ịkwadebe maka foto foto na Kensington Obí site na itinye ntụ ntụ ihu dị nro na imi na agba ya. 'Nke ahụ mara mma,' a ga - ahụ Diana ka ọ na - ekwu ka William ji nwayọ na - eche ihu.
nwere ike crunches belata afọ abụba
Foto ndị dị ugbu a site na oge ịse foto onwe onye, ​​nke mere na 1985 na Kensington Obí, gosipụtara Princess Diana dị afọ 24 na William na Prince Harry dị afọ 1 nọ ọdụ na piano padded green. Foto nke ezinụlọ eze kpuchiri elu piano.
N'ihi na Onye Nlekọta Ihe , ihe osise a bụ n'ezie akụkụ nke ogologo montage dị ogologo karịa site na foto ndị ọse foto Tim Graham sere.
Na vidiyo nkeji 5 na ọkara, ụmụ nwoke ahụ kpọrọ igodo piano, William susuru Harry ọnụ n'isi ( awww ) wee kpochapụ ọnụ ya (LOL), na Prince Charles na-eji akwa nhicha peekaboo iji mee ka nwa Harry lebara anya maka igwefoto ahụ.
Mgbe ahụ, oge maka etemeete aka-acha ọkụ. (Na-eche ma ọ gosipụtara otu nkà ahụ mgbe ọ lụrụ Kate ...)
Njikọ: Enwere * Ọzọ * Princess Diana Movie na Ọrụ (E wezụga Onye nke Kristen Stewart Na-akụ)
na-adịgide adịgide mwepụ n'ụlọ ọgwụgwọ ụlọ
esi ewepu ntutu ihu na-adịgide adịgide n'ụlọ n'ụzọ nkịtị
ndepụta dị iche iche oroma
agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ n'okpuru 500
nke edozi isi suut maka oval ihu nwanyi
belata ntutu daa usoro ụlọ
ọgwụ kwụsị ntutu ịda